ကိုယ့်ရည်းစား ထားသွားအောင် လုပ်နည်း – Gentleman Magazine
လမ်းခွဲတာ ကအရမ်းခက်ခဲ နက်နဲတဲ့ အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး. တခါတလေ မှာ အရမ်းနဲ့ လွယ်လွန်းပါသည်. ဥပမာ ကိုယ်တခြားဆော်သွားဖွန်နေတာ ကိုယ့်ဆော်မိသွားတာတို့ လိုမျိုး.. တခါတလေ မှာကိုက ဘာအမှားတစ်ခုမှ မရှိပဲ ဘလိုင်းကြီး အဖြတ်ခံရတာမျိူးလည်းရှိပါသည်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဘက်က အမှားကိုယ် လွယ်လွယ်နဲ့သိရန်၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့ဘက်က စဖြတ်စေရန် အတွက် ဆော်တွေလုံးဝ မကြိုက်တဲ့ အချက်ကြီး ၇ ချက်ကိုဖောက်သည်ချလိုက်ပါသည်။
၁။ သူ့ဘော်ဒါ တွေနဲ့ ကြူကြူခင်းခြင်း
သူနဲ့ အတူရှိနေချိန် တခြား အလန်းဇယားတွေကို မျက်စိအစာကျွေးတာ ထက်ဆိုးတာ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေကို သွားကြူတာပါ. ကိုယ်က ခင်တက်လို့ စတာ နောက်တာပဲဖြစ်နေပါစေ . ကိုယ်က တခြားကောင်မလေးတွေနဲ့ ဟေးလားဟားလား နေလို့ကတော့ သေဖို့သာပြင်ပဲ. သူ့ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ ကိုယ်ဝင်ရောနိုင်တာ ကို သူကကြည်ဖြူနိုင်ပေမယ့် အတိုင်းအတာတစ် ခုတော့ရှိတယ်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စေတနာမပိုမိစေနဲ့၊ သူ့ကို ကျော်ပြီး အကဲမပိုနဲ့။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် သူက သူ့တစ်ယောက်ထဲကိုပဲ မြင်စေချင် ဂရုစိုက်စေချင်တာ။
ခုခေတ်ကြီးမှာ မိန်းခလေးတွေက ကိုယ်စားတာ ကိုယ်ရှင်းနို်င်တဲ့ အနေအထားရှိပါတယ်။ မထင်ရင်မထင်သလို လစ်ရင်လည်း ရှင်းပေးနေတက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျား တန်ဖိုးမကျအောင် ကိုယ်ကပဲ အမြဲ ရှင်းပေးသင့်ပါတယ်။ မရရင် အတင်းလုရှင်းပေးပါ။ မိန်းမလုပ်စာ ထို်င်စားတယ်ဆိုပြီး သိက္ခာ အကျမခံပါနဲ့။ ဘယ်မိန်းမမှ သူ့ကို ငွေလောက်တန်ဖိုးမထားတဲ့ ယောက်ျားကို မတွဲချင်ပါဘူး။
စကြိုက်ကြိုက်ချင်း ဆိုရင် ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ အမြဲတမ်း အတူသွား အတူလာ အတူစားချင်နေတာ သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို မိနစ်တိုင်း စက္ကန့်တိုင်း တွေ့ဖို့၊ ဖုန်းတကျီကျီ ဆက်တာတို့မလုပ်ပါနဲ့။ သူက ကိုယ့် ကိုလည်း တွေ့ချင် အတူတူရှိနေချင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် သူက ကုိုယ့်ကို ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် လုပ်နေတာလဲမြင်ချင်ပါတယ်။ ဒီကောင် ၁၀၉ ၁၁၀ တော်တော်အားနေတယ်လို့ အထင်မခံရပါစေနဲ့။ နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေရင် သူ့ကို မွန်းကြပ်စေပြီး ယောက်ျားတန်ဖိုး ကျပါတယ်. တစ်ချိန်လုံး နောက်ကလိုက်နေ ဖုန်းတွေ ဆက်နေမယ့် အစား သူနဲ့တွေ့ရင် ဘယ်သွားမလဲ ဘာလုပ်မလဲ ကိုယ်ဟာကိုယ် စီစဉ်ပါ. လူတစ်ယောက်က ကိုယ်နဲ့တစ်ချိန်လုံးရှိနေတဲ့သူ ကိုသတိရတာ လွမ်းတယ်ဆိုတာမရှိပါ. ဝေးနေတော့မှ လွမ်းတာ သတိရတာ တွေရှိလာမှာပါ။
မ်ိန်းမအားလုံးက ကိုယ့်ချစ်သူက ဂရုစုိုက်တာ လုိုချင်ကြပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာချစ်သူအပေါ် ဂရုမစိုက်တက်ရင် (သို)့ ဂရုစိုက်မှု နည်းရင် မိန်းခလေးတွေ က သူတို့ကို ခနတွဲတယ်တို့ အပြင်းပြေတွဲတယ် တို့မြင်လာတက်တယ်။ ကိုကဂရုစုိုက်တာ နည်းလာရင် မိန်းမတွေက သူတို့ကို ဖြတ်တော့မယ်ထင်ပြီး သူတို့ က အရင် စဖြတ်ရအောင် လမ်းခွဲစကားတွေပြောလာတက်တယ်။ ဂရုစုိုက်တယ် လို့ထင်အောင် အချိန်ပြည့် ဂရုစုိုက်ပြစရာမလုိုပဲ တစ်ရက် တစ်ခါလောက်ဖုန်းခေါ်တာတို့. သတိရကြောင်း မတ်ဆေ့လေးပို့တာ တို့ဆို လုံလောက်ပါပြီ။ ဟုိုနဲနဲ ဒီနဲနဲ ဂရုစိုက်ပြလိုက်ရင်ပဲ သဲသဲလှုပ် ကြွေသွားစေမှာပါ။
ဟိုလိုက်ပို့မယ် ဒီလိုက်ပို့မယ်ပြော ပြီး ကတိမတည်တာ. ချိန်းထားပြီး အချိန်နီးမှ ဖျက်ပြစ်တာ ပျိုမေ တွေ လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ နောက်တခါခေါ် ရင်တောင် လိုက်ဖို့ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်နည်းသွားပါမည်။
အကယ်၍ ကိုယ်တကယ် အရေးပေါ် ကိစ္စ ပေါ်လာ ရင် သိသိချင်း အကြောင်းကြားပြီး တောင်းပန်ကြောင်းနဲ့ နောက် ဘယ်နေ့ပြန်ပြီး တွေ့မလဲ တခါတည်းရှင်းပြရင် ပျိုမေ တွေ အနေနဲ့ သဘောတွေ့စေပါတယ်။ နောက်ထပ် ချိန်းထားတဲ့ရက်ကိုတော့ ထပ်မပျက်မိစေပါနဲ့။
ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် လုပ်ချင်တာလုပ်ရတာကြိုက်ကြတာပဲ။ ကိုယ့်ကောင်မလေးက ကိုယ့်ကို စောင့်ကြည့်နေချိန် ကိုယ်နဲ့ တွဲဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး အဖြေမပေးသေးဘူး ဆိုရင် အကြပ်ကိုင်ပြီး တွဲရင်တွဲ မတွဲရင် ကွဲဆိုတာမျိုးမလုပ်မိပါစေနဲ့။ သူ့ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့သွားနေလာနေတာကို သ၀န်မတိုမိပါစေနဲ့။ စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့စောင့်ပါ။ ကိုယ့်ဆီရောက်လာ ရင် ကိုယ်နဲ့ဆိုင်လို့ဖြစ်ပြီး မရောက်လာရင် တော့ လဲလောက မှာ သူတစ်ယောက်ထဲမိန်းမမဟုတ်ပါ။ ပေါလို့နေတာ ရိုက်သတ်တောင် မကုန်ဘူးဆိုတာ စိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားပါ။
၇။ ဆော်ဟောင်းနှင့် ဘော်ဘော်လိုနေခြင်း
ရည်းစာဟောင်းနဲ့ပြတ်ရင် အဆက်အသွယ်ပါပြတ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေလို ဆက်ခင်နေတယ်ဆိုတာတော့ကောင်းပါတယ်။ လက်ရှိ ရည်းစာ အသစ်ရနေပြီဆိုရင် တော့ ဘော်ဘော်ဆိုတဲ့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ဖုန်းပြောတာ မတ်ဆေ့ပို့တာ တွေကို အတက်နိုင်ဆုံးနည်းအောင်လုပ်ပါ။ အကယ်၍ လူချင်းတွေ့စရာကိစ္စ ရှိရင် လက်ရှိရည်းစား ကို အသိပေးပြီးမှ သွားပါ။ လိုက်ချင်တယ်ဆိုလည်း ခေါ်သွားလုိုက်ပါ။ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်ကြောင်း ကို သိသိသာသာဖြစ်နေပါစေ။ တကယ်လို့ လက်ရှိ ရည်းစား က မကြိုက်ဘူးဆို အတက်နိုင်ဆုံး ရည်းစားဟောင်းနဲ့ အဆက်အသွယ် မလုပ်ပါနဲ့။ နောက်ဆုံးကုန်ကုန် ပြောရရင် ရည်းစားဟောင်းဖြစ်ပြီ ဆိုကတည်းက ကိုယ်နဲ့ ကီးမကိုက်လို့ ပြဲ ပြတ်ခဲ့ရတာ။ သူ့ကြောင့်ကိုယ်နဲ့ ကီးကိုက်နို်င်မယ့် သူကိုတော့ အဆုံးရှုံးမခံသင့်ဘူး။
မိန်းကလေးတိုင်း တောင့်တပြီး … ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့ …
လမျးခှဲတာ ကအရမျးခကျခဲ နကျနဲတဲ့ အလုပျတော့မဟုတျပါဘူး. တခါတလေ မှာ အရမျးနဲ့ လှယျလှနျးပါသညျ. ဥပမာ ကိုယျတခွားဆျောသှားဖှနျနတော ကိုယျ့ဆျောမိသှားတာတို့ လိုမြိုး.. တခါတလေ မှာကိုက ဘာအမှားတဈခုမှ မရှိပဲ ဘလိုငျးကွီး အဖွတျခံရတာမြိူးလညျးရှိပါသညျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျဘကျက အမှားကိုယျ လှယျလှယျနဲ့သိရနျ၊ ဒါမှမဟုတျ သူ့ဘကျက စဖွတျစရေနျ အတှကျ ဆျောတှလေုံးဝ မကွိုကျတဲ့ အခကျြကွီး ရ ခကျြကိုဖောကျသညျခလြိုကျပါသညျ။
၁။ သူ့ဘျောဒါ တှနေဲ့ ကွူကွူခငျးခွငျး
သူနဲ့ အတူရှိနခြေိနျ တခွား အလနျးဇယားတှကေို မကျြစိအစာကြှေးတာ ထကျဆိုးတာ သူ့ သူငယျခငျြးတှကေို သှားကွူတာပါ. ကိုယျက ခငျတကျလို့ စတာ နောကျတာပဲဖွဈနပေါစေ . ကိုယျက တခွားကောငျမလေးတှနေဲ့ ဟေးလားဟားလား နလေို့ကတော့ သဖေို့သာပွငျပဲ. သူ့ သူငယျခငျြးတှေ နဲ့ ကိုယျဝငျရောနိုငျတာ ကို သူကကွညျဖွူနိုငျပမေယျ့ အတိုငျးအတာတဈ ခုတော့ရှိတယျ. ဘာပဲဖွဈဖွဈ စတေနာမပိုမိစနေဲ့၊ သူ့ကို ကြျောပွီး အကဲမပိုနဲ့။ ကုနျကုနျပွောရရငျ သူက သူ့တဈယောကျထဲကိုပဲ မွငျစခေငျြ ဂရုစိုကျစခေငျြတာ။
ခုခတျေကွီးမှာ မိနျးခလေးတှကေ ကိုယျစားတာ ကိုယျရှငျးနျိုငျတဲ့ အနအေထားရှိပါတယျ။ မထငျရငျမထငျသလို လဈရငျလညျး ရှငျးပေးနတေကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ယောကျြား တနျဖိုးမကအြောငျ ကိုယျကပဲ အမွဲ ရှငျးပေးသငျ့ပါတယျ။ မရရငျ အတငျးလုရှငျးပေးပါ။ မိနျးမလုပျစာ ထျိုငျစားတယျဆိုပွီး သိက်ခာ အကမြခံပါနဲ့။ ဘယျမိနျးမမှ သူ့ကို ငှလေောကျတနျဖိုးမထားတဲ့ ယောကျြားကို မတှဲခငျြပါဘူး။
စကွိုကျကွိုကျခငျြး ဆိုရငျ ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့ အမွဲတမျး အတူသှား အတူလာ အတူစားခငျြနတော သဘာဝပါ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ကို မိနဈတိုငျး စက်ကနျ့တိုငျး တှဖေို့၊ ဖုနျးတကြီကြီ ဆကျတာတို့မလုပျပါနဲ့။ သူက ကိုယျ့ ကိုလညျး တှခေ့ငျြ အတူတူရှိနခေငျြပါလိမျ့မယျ။ ဒါ့အပွငျ သူက ကုိုယျ့ကို ကိုယျ့အလုပျကိုယျ လုပျနတောလဲမွငျခငျြပါတယျ။ ဒီကောငျ ၁၀၉ ၁၁၀ တျောတျောအားနတေယျလို့ အထငျမခံရပါစနေဲ့။ နောကျကတကောကျကောကျလိုကျနရေငျ သူ့ကို မှနျးကွပျစပွေီး ယောကျြားတနျဖိုး ကပြါတယျ. တဈခြိနျလုံး နောကျကလိုကျနေ ဖုနျးတှေ ဆကျနမေယျ့ အစား သူနဲ့တှရေ့ငျ ဘယျသှားမလဲ ဘာလုပျမလဲ ကိုယျဟာကိုယျ စီစဉျပါ. လူတဈယောကျက ကိုယျနဲ့တဈခြိနျလုံးရှိနတေဲ့သူ ကိုသတိရတာ လှမျးတယျဆိုတာမရှိပါ. ဝေးနတေော့မှ လှမျးတာ သတိရတာ တှရှေိလာမှာပါ။
မျိနျးမအားလုံးက ကိုယျ့ခဈြသူက ဂရုစုိုကျတာ လုိုခငျြကွပါတယျ။ အကယျ၍ သငျဟာခဈြသူအပျေါ ဂရုမစိုကျတကျရငျ (သို)့ ဂရုစိုကျမှု နညျးရငျ မိနျးခလေးတှေ က သူတို့ကို ခနတှဲတယျတို့ အပွငျးပွတှေဲတယျ တို့မွငျလာတကျတယျ။ ကိုကဂရုစုိုကျတာ နညျးလာရငျ မိနျးမတှကေ သူတို့ကို ဖွတျတော့မယျထငျပွီး သူတို့ က အရငျ စဖွတျရအောငျ လမျးခှဲစကားတှပွေောလာတကျတယျ။ ဂရုစုိုကျတယျ လို့ထငျအောငျ အခြိနျပွညျ့ ဂရုစုိုကျပွစရာမလုိုပဲ တဈရကျ တဈခါလောကျဖုနျးချေါတာတို့. သတိရကွောငျး မတျဆလေ့ေးပို့တာ တို့ဆို လုံလောကျပါပွီ။ ဟုိုနဲနဲ ဒီနဲနဲ ဂရုစိုကျပွလိုကျရငျပဲ သဲသဲလှုပျ ကွှသှေားစမှောပါ။
ဟိုလိုကျပို့မယျ ဒီလိုကျပို့မယျပွော ပွီး ကတိမတညျတာ. ခြိနျးထားပွီး အခြိနျနီးမှ ဖကျြပွဈတာ ပြိုမေ တှေ လုံးဝမကွိုကျပါဘူး။ နောကျတခါချေါ ရငျတောငျ လိုကျဖို့ရာခိုငျနှုနျး တျောတျောနညျးသှားပါမညျ။
အကယျ၍ ကိုယျတကယျ အရေးပျေါ ကိစ်စ ပျေါလာ ရငျ သိသိခငျြး အကွောငျးကွားပွီး တောငျးပနျကွောငျးနဲ့ နောကျ ဘယျနပွေ့နျပွီး တှမေ့လဲ တခါတညျးရှငျးပွရငျ ပြိုမေ တှေ အနနေဲ့ သဘောတှစေ့ပေါတယျ။ နောကျထပျ ခြိနျးထားတဲ့ရကျကိုတော့ ထပျမပကျြမိစပေါနဲ့။
ဘယျသူမဆို ကိုယျ့သဘောနဲ့ ကိုယျ လုပျခငျြတာလုပျရတာကွိုကျကွတာပဲ။ ကိုယျ့ကောငျမလေးက ကိုယျ့ကို စောငျ့ကွညျ့နခြေိနျ ကိုယျနဲ့ တှဲဖို့ အဆငျသငျ့မဖွဈသေးဘူး အဖွမေပေးသေးဘူး ဆိုရငျ အကွပျကိုငျပွီး တှဲရငျတှဲ မတှဲရငျ ကှဲဆိုတာမြိုးမလုပျမိပါစနေဲ့။ သူ့ယောကျြားလေး သူငယျခငျြးတှေ နဲ့သှားနလောနတောကို သဝနျမတိုမိပါစနေဲ့။ စိတျရှညျရှညျ နဲ့စောငျ့ပါ။ ကိုယျ့ဆီရောကျလာ ရငျ ကိုယျနဲ့ဆိုငျလို့ဖွဈပွီး မရောကျလာရငျ တော့ လဲလောက မှာ သူတဈယောကျထဲမိနျးမမဟုတျပါ။ ပေါလို့နတော ရိုကျသတျတောငျ မကုနျဘူးဆိုတာ စိတျထဲမှာ ထညျ့ထားပါ။
၇။ ဆျောဟောငျးနှငျ့ ဘျောဘျောလိုနခွေငျး
ရညျးစာဟောငျးနဲ့ပွတျရငျ အဆကျအသှယျပါပွတျသှားလရှေိ့ပါတယျ။ သူငယျခငျြးတှလေို ဆကျခငျနတေယျဆိုတာတော့ကောငျးပါတယျ။ လကျရှိ ရညျးစာ အသဈရနပွေီဆိုရငျ တော့ ဘျောဘျောဆိုတဲ့ ရညျးစားဟောငျးနဲ့ဖုနျးပွောတာ မတျဆပေို့တာ တှကေို အတကျနိုငျဆုံးနညျးအောငျလုပျပါ။ အကယျ၍ လူခငျြးတှစေ့ရာကိစ်စ ရှိရငျ လကျရှိရညျးစား ကို အသိပေးပွီးမှ သှားပါ။ လိုကျခငျြတယျဆိုလညျး ချေါသှားလုိုကျပါ။ ရညျးစားဟောငျးနဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈကွောငျး ကို သိသိသာသာဖွဈနပေါစေ။ တကယျလို့ လကျရှိ ရညျးစား က မကွိုကျဘူးဆို အတကျနိုငျဆုံး ရညျးစားဟောငျးနဲ့ အဆကျအသှယျ မလုပျပါနဲ့။ နောကျဆုံးကုနျကုနျ ပွောရရငျ ရညျးစားဟောငျးဖွဈပွီ ဆိုကတညျးက ကိုယျနဲ့ ကီးမကိုကျလို့ ပွဲ ပွတျခဲ့ရတာ။ သူ့ကွောငျ့ကိုယျနဲ့ ကီးကိုကျနျိုငျမယျ့ သူကိုတော့ အဆုံးရှုံးမခံသငျ့ဘူး။
မိနျးကလေးတိုငျး တောငျ့တပွီး … ယောကျြားလေးတိုငျး အားကစြဖေို့ …
Previous: အားလုံးကချဉ်တဲ့သူတွေရဲ့ လက္ခဏာ(၆)ခု
Next: ယောက်ျားတွေဘာကြောင့် ဖောက်ပြန်တာလဲ ? အဖြေက အံ့အားသင့်စေမှာပါ။